माया त यस्तो होस् ! - Sajhamanch
२०७७, माघ १४ गते बिहानिको ०५:२४:५९ बजे Tuesday 26th January 2021
माया त यस्तो होस् !
यस्ता पति/पत्नीले आफ्ना पार्टनरको स्वास्थ्य अवस्था के छ, दिनभर के खायो, के खाएन, औषधीको छुट्यो कि भन्नेसम्मका ख्याल राख्ने गर्छन् । त्यतीमात्र होइन, पार्टनरले लगाएको लुगा ठिक छ-छैन, गरेको काम सही छ-छैन भन्नेसम्ममा चासो राख्छन् । पार्टनरलाई जाडो भएको, भोकाएको, थाकेको सबै अवस्थाबारे बुझ्न खोज्ने पति/पत्नी मायालु हुन्छन् ।
पार्टनरको अनुहार सधै हँसिलो होस्, खसी होस् भन्ने चाह राख्ने पति-पत्नीलाई पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ । यस्ता पति(पत्नी पार्टनरको खुसीमा आफ्नो खुसी खोज्छन् । पार्टनरको सुखमा आफु आनन्दाभूत गर्छन् । त्यतीमात्र होइन, पार्टनर के कुरामा खुसी हुन्छन्, के कुरामा रमाउँछन् त्यस्तै वातावरण बनाउने प्रयास गर्छन् ।
यद्यपी पति/पत्नी जो आफ्नो पार्टनरप्रति सकारात्मक भाव राख्छन् । पार्टनरको भावनालाई सम्मान गर्छन् । पार्टनरले बोलेको, भनेको, सोचेको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिन्छन् । यस्ता पति-पत्नीले आफ्ना पार्टनरलाई माया गर्छ ।
January 3, 2021 5:53 pm | टिप्स/जानकारी